Dawlada Taagta Daran Ee Somalia Oo Canbaaraysay Talaabada Ciidamada Kenya Ku Galeen Dalka Somalia Iyo Al-shaabab Oo Ka Dhabaysay Hanjabadii Nairobi | Araweelo News Network (Archive) -
Dawlada Taagta Daran Ee Somalia Oo Canbaaraysay Talaabada Ciidamada Kenya Ku Galeen Dalka Somalia Iyo Al-shaabab Oo Ka Dhabaysay Hanjabadii Nairobi
Muqdisho(ANN) Madaxweynaha dawladda taagta daran ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed, ayaa markii u horaysay ka hadlay ciidamada dawladda Kenya ee todobaadkii hore soo galay gudaha dalka Somalia . kadib markii ay kasoo talaabeen xadka ay wadaagaan labada dal.Sh. Shariif waxa uu
ku tilmaamay talaabada dawladda Kenya in aanay dowladda iyo shacabka Soomaaliya raalli ka ahayn soo gelitaanka ciidammada Kenya ee gudaha Somalia, wuxuuna hadalkaa ka sheegay mar uu maanta ka hadlay Degmada Dayniile, oo todobaadkii hore ay dagaallo culusi ka dheceen. Sh Shariif ayaa sheegay in ciidammada AMISOM ay iyagu ku joogaan rabitaanka dowladda Soomaaliya iyo sharciyad ay ka heleen Qaramada Midoobay, balse aanay Kenya ka haysan ogolaansho dhinacooda ah iyo mid Qaramada midoobay iyo midawga afrika toona. Sidaa awgeed ay qayral sharci tahay inay soo galaan Kenya Somalia, isagoo xusay inay jiraan waxyaabo ay dhibsanayaan oo ay kala hadleen dawladda Kenya. Laakiin ay diyaar u yihiin sidii ay Kenya iskaga kaashan lahaayeen xagga ammaanka, isagoo uga mahad celiyay inay Sommaaliya u taba bartay ciidan, balse ay ciidamada dawladda Somalia ee uu madaxda ka yahay ku filan yihiin hashaa.
Diyaarado ay leedahay Kenya oo kuwa milateriga ah ayaa shalay duqeeyay duleedka dekedda magaalada xeebta ah ee Kismaayo, kadib markii Dawladda Kenya ay dhowaan sheegtay inay dawladda taagta daran ee Somalia ka wada hadleen sidii ay hawlagl ka dhan ah Xarakada Al-shabaab ee ka dagaalanta Somalia ugu weerari lahaayeen fadhiisimadooda gudaha Somalia. waxaana todobaadkii hore magaalada Muqdisho yimi wefdi ka socda dalka Kenya, kuwaas oo kulan la yeeshay Masuuliyiinta dawladda taagta daran ee Shariif. Wasiirrada arrimaha dibedda iyo gaashaandhiga ee dowladda Kenya oo kulamo kula yeeshay Villa Somalia masuuliyiinta dowladda taagta daran ee Soomaaliya ayaa kullamadaa kaddib saxaafadda u sheegay inay labada dhinac ku heshiiyeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen mid halis ku ah amnigaSomalia iyo waliba dalka Kenya.
Wasiirka Arrimaha Debadda ee Kenya, Moses Watangula, ayaa hore u xaqiijiyay in ciidammada dalka Kenya ay galeen gudaha dhulka Soomaaliya, wuxuuna ku macneeyay talaabadaa mid ay ku difaacayaan dalkooda oo ay kula dagaallamayaan sida uu sheegay Al –Shabaab oo khatar ku ah.
Dhawaaqa Madaxweynaha dawladda taagta daran ee Somalia ayaa soo bxay todobaad ka dib markii ay dawladda Kenya ciidamadeedu ku jireen Somalia, iyagoo ku doodayay inay ku yimaadeen codsiga dawladda, isla markaana ay kula dagaalamayeen xarakada Al-shabaab deegaano ka tirsan Koonfurta Somalia oo ka mid ah meelaha ay Al-shabaab ka taliso.
Dhinaca kale Al-shabaab ayaa talaabada dawladda Kenya kusoo gashay Somalia ku tilmaantay mid daandaansi ah oo ay jawaab ka bixinayaan, taas oo la rumaysan yahay inay horseeday weerar qarax xalay laga fuliyay dalka Kenya oo lala begsaday goob lagu caweeyo oo ku taala xarunta dalkaa ee Nairobi, iyadoo qaraxaasi sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah.
Madaxa booliska magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Orig Mugambi ayaa sheegay inay heleen cadaymo hor dhac ah oo sheegaya inay ka dambeeyeen Xarakada Al Shabaab.bamgacmeedkii xalay ka dhacay magaaladaa. Sarkaal kale oo u hadlay booliska dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay inay la xidhiidhiyeen qaraxaa Xarakada Al -Shabaab oo uu sheegay inay uga imaanayaan hanjabaado iyo cagajuglayn, isagoo ka codsaday shacabka dalka Kenya inay la shaqeeyaan gacana siiyaan booliska si ay uga hortagaan amaan darada iyo hanjabaadaha kaga imanaya Al- Shabaab.